Isbarbar-dhigga go’aanka Guddoonka Golaha Shacabka ee sharciyadda iyo kala diridda Guddiga Maaliyadda – Kalfadhi
Isbarbar-dhigga go’aanka Guddoonka Golaha Shacabka ee sharciyadda iyo kala diridda Guddiga Maaliyadda
Warkii Hogaanka iyo Xubno ka tirsan Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka (Guddoomiyaha Golaha Shacabka waxba kama oga go’aanka uu Kuxigeenkiisa ku kala diray Guddiga Maaliyadda) ayaa hadda run u muuqanaya, kadib markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan soo saaray go’aan si cad uga soo horjeeda kii uu horay u qaatay Kuxugeenkiisa Cabdiwali Ibraahim Muuddey, kaas oo ah inuu shaqeynayo Guddiga Maaliyadda ee Golaha.
Guddoomiye Muuddey waxa uu xusay in go’aanka uu ku kala diray Guddiga Maaliyadda uu ogaa Guddoomiye Mursal, sida ku caddeyd warqadda uu soo saaray 28-ka bishii hore, laakiin taas waxaa si muuqata u beeninaya go’aanka ku qornaa warqadda uu shalay soo saaray Mursal, kaasoo xalaaleynaya sharciyadda guddigaas, isagoo cuskanaya dib u eegis uu ku sameeyey baabi’inta guddiga.
Guddoomiyaha iyo Kuxigeenkiisa waxay go’aannadooda u adeegsanayaan qodobbo iyo farqooyin isku mid ah oo ku qoran Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka, taasoo iyana keeni karta su’aal ah: Sidee qodobbadaas loogu qaadan karaa 2 go’aan oo iska soo horjeedda. Inkasta oo ay meelaha qaar ku kala duwanaayeen, waxay haddana isla daliishadeen qodobbada 58-aad, 60-aad iyo 62-aad iyo qaar ka mid ah farqooyinkooda, oo uu mid kasta sharci uga dhigayo go’aankiisa.
Guddoomiye Muuddey waxba lagama weydiin, isaguna ma bixin fursad su’aal looga weydiiyo go’aankiisa, saasdaraadeed ma jirto faahfaahin uu ka bixiyey kala dirista uu ku sameeyey Guddiga Maaliyadda. Hase ahaatee, farriintiisa waxaa ka hor yimid Xubnaha Guddiga iyo Xildhibaanna kale oo ku sifeeyey iney tahay waxay la gaar yihiin isaga iyo Kuxugeenkiisa Mahad Cabdalla Cawad, kaas oo ay ku qoonsadeen go’aankii uu uga raaligeliyey Wasaaradda Maaliyadda War-bixintii Guddiga Maaliyadda ee ku eedeneysay Xukumadda musuq-maasuq, kadibna uu ku laalay, intii uu socday kulankii 29-aad ee Golaha.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, wareysii uu VOA-da siiyey 29-kii bishii hore waxa uu ku sheegay in kala dirista Guddiga Maaliyadda ee Guddoomiye Muuddey uusan waxba kala socon, uuna baari doono markuu yimaado Muqdisho. Maalinkaas waxa uu joogay Turkiga, waase markuu bixiyey baaqa ah inuu beeninayo sheegashada Muuddey ee ahayd inuu Mursal wax ka og yahay go’aankiisa. Balse, Guddoomiye Mursal waxa uu wareysigaas ku sheegay, waliba ku celceliyey, inuusan gaari doonin go’aan u gaar ah ee uu arrinta kala dirista Guddiga Maaliyadda dhex geyn doono Golaha, mase dhicin taas.
Warqaddii uu Guddoomiyaha Goluhu soo saaray shalay waxay sheegeysaa inuu Golaha Shacabku wax ka ogaa go’aanka lagu diiday go’aankii kala dirista Guddiga Maaliyadda ee Muuddey, haddana meel Xubnaha Golaha Shacabka looga qaaday cod (afti) ama ay isugu yimaadeen oo ay go’aankaas wax uga gaareen lama oga, warqadduna sidaas wax uma caddeyneyso. Waxaan sidoo kale la hubin sheegashada warqaddaas ee ah iney, sidoo kale, Kuxigeennada Guddoomiyaha la ogaayeen Mursal go’aanka uu Guddiga Maaliyadda shaqadiisa ugu fasaxay.
Inuu Guddiga Maaliyaddu shaqadiisa sii wato waxay falanqeeyayaal, siyaasiyiin, xildhibaanno iyo xukumadduba u arkaan culeys weyn oo lagu soo fasaxay Dowladda Madaxweyne Farmaajo, taas oo u aragta in eedda Guddiga Maaliyadda ee ka dhanka ah Wasaaradda Maaliyadda iyo Maamulka Gobolka Banaadir ay tahay mid siyaasadeysan, oo ay soo abuubuleen dad dana gaar ah ka waayey dowladda, sida uu ku dooday Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Beyle. Waxaa hubanti la’aan ah waxa dhaci kara haddii War-bixintii Miisaaniyadda 2018 dib loo hor keeno Golaha.
Guddiga Doorashada Koofur Galbeed oo difaacay musharraxnimada Mukhtaar Roobow